FAQ -3- Learn to Speak English Online
​မေး........ဆရာ there+(be) pattern အနောက်မှာ definite article သုံးပုံလေး မျှပေးစေချင်ပါတယ် ​ဖြေ........There be ကို Definite article နဲ့ တွဲမသုံးပါဘူး။ ( Indefinite article , no article , indefinite determiner ....some , any...etc.../ indefinite pronoun...somebody , nothing...etc ) ဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲတွဲသုံးပါတယ်။ ​မေး….make fun of sb နဲ့ laugh at sb တူပါသလားဆရာ ​ဖြေ…make fun of someone ( Idiom )to be unkind to someone and laugh at orcause others to laugh at the person ( Cambridge Dictionary )( ပြောင်သည်၊ လှောင်သည်၊ သရော်သည် ) –You’re always making fun of me!( မင်းဟာ အမြဲတန်း ငါ့ကို လှောင်ပြောင်နေတာပါပဲလား ) laugh at sb/sth ( Phrasal verb ) –to chuckle or giggle loudly at someone or something, perhaps in ridicule( ရီစရာကောင်းလို့ တခစ်ခစ် ခပ်ကျယ်ကျယ် ရယ်သည် )Thank goodness, the audience laughed at all my jokes( ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ပရိပ်သတ်က ကျနော် ရီစရာလုပ်တာကိုသဘောကျပြီးတခွိခွိ ရယ်မောကြတယ် )။ ​မေး….now that နဲ့ because နဲ့ အသုံးကွာခြားမှု့ကို သိပါရစေ ဆရာ
​ဖြေ…now (that) – ( Conjunction - စကားဆက် )You use now that to give an explanation ofanew situation:( Cambridge Dictionary )( အခြေနေသစ်တစ်ရပ်ကို ရှင်းပြချက်ပေးဖို့..အသုံးပြုတဲ့ ) သဘောဖြစ်တယ်။နေပြီမို့ ၊ နေတာမို့ ၊လို့မို့ ၊ ပြီမို့ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။Kevin believes he’samore responsible person now that he’saparent.( Kevin ဟာ ဖခင်ဖြစ်နေပြီမို့..ပိုပြီးတာဝန်ရှိတဲ့သူလို့ ယုံကြည်မိတယ် )​Because – ( Conjunction - စကားဆက် )for the reason that: ( အကြောင်းပြချက်အတွက်သုံးတယ် )သောကြောင့် ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။We can’t go to Julia’s party because we’re going away that weekend.( စနေတနင်္ဂနွေမှာ ကျနော်တို့ အဝေးကိုသွားမှာဖြစ်လို့ (သောကြောင့် )Julia ပါတီပွဲကို မသွားနိုင်ဘူး )။ ​မေး.....in case ဆိုတာ လိုရမယ်ရဆိုတဲ့ သဘောလားဆရာ
​ဖြေ......In case - ( Oxford Dictionary ) - Asaprovision against something happening ( တစ်ခုခုဖြစ်လာမှာကို ကြိုတင်စီမံထားခြင်း ) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်.....we put on thick sweaters, in case it was cold
​မေး.....Understand and realize အသုံးကွာခြားချက်
​ဖြေ.....နှစ်ခုလုံးက ( နားလည်သည် ) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။Understand ဆိုတာ...သာမာန်နားလည်သွားတဲ့ အခြေနေမှာပဲရှိပါတယ်။နက်နဲတဲ့ ခံစားမူ့...အဓိပ္ပါယ်မပါဘူး...ဥပမာDo you understand how to speak English?( အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာ နားလည်လား )။Realize ဆိုတာက...အရင်က မသိခဲ့တဲ့အရာတွေကို အခု ( အစစ်အမှန်အခြေနေအရပ်ရပ်ကို ခံစားသိမြင် နားလည် သဘောပေါက်တာ )။ သူ့မှာနက်နဲတဲ့ ခံစားမူ့ပါတယ်။ ဥပမာ.........After I thought about it foralong time, I realized I would have to getan education if I wanted to be successful in life.( ဒီအကြောင်းကို အကြာကြီး စဉ်းစားပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ...ကျနော်ဟာ အောင်မြင်တဲ့ဘ၀ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်...ပညာသင်ကိုသင်ယူရမယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ )။